HTC: "Waa Apple kan na nuquliya" | Wararka IPhone
HTC: "Waa Apple kan na nuquliya"
Wax badan baa laga sheegayaa HTC One A9 tan iyo markii la soo bandhigay. Waxay ka hadlayaan isku ekaanshaha qalabkani la leeyahay iPhone 6 / s. Hadal heyn badan ayaa jirtay in madaxweynaha HTC ee Waqooyiga Aasiya ay aheyd inuu fagaaraha ka yimaado si uu u dhaho waxa ay qabteen ma ahan nuqul oo hadii qof wax soo guuriyey waa Apple. Jack Tong waxay ku saleysan tahay taas Apple waxay u guurisay naqshadooda anteenooyinka, isagoo ka fogeynaya in khadadkaasi ay ahaadaan inay joogaan si aan daboolku u lumin, sida ku dhacday anteenada. Wax kale ma jiraan? Ma jiraan wax isku mid ah oo u dhexeeya iPhone 6 iyo HTC One A9?
Sida aad ku arki karto sawirka madaxa u ah qodobkaan, runtii, HTC waxay xarriiqyo xarriiqyo ah dusha sare iyo hooseba ku sameeyeen naqshad leh gadaal-aluminium dhan. Halkaas nuqulkii Apple-ka ee ahaa HTC ayaa ku dhammaan lahaa. Laakiin Tong ma xuso in M8 uu adeegsado a laba-midab flash kala duwan, wax aan markii ugu horreysay ku aragnay iPhone 5s sanadkii 2013 lana wacay Tone True. Hadda aan eegno inta ka hartay naqshadaynta qalabka.
Tani waxay ahayd HTC One kahor iPhone 6:
Tanina waa HTC One A9 (oo ku xigta iPhone 6, oo kor saaran) laga bilaabo 2015:
Sida aad u aragto, moodelladii hore ee uu Tong ku dhisnaa in la yiraahdo HTC ma nuquliso, waxay lahayd naqshad haddii aan ka eegno kor ama hoose Qaab D, halka hore ee gebi ahaanba siman iyo xagga dambe ayaa qalooca. HTC One A9 wuxuu ku siman yahay labada dhinacba oo leh geesyo macaan, wareegsan, taas oo ka dhigaysa iyaga inay leeyihiin 0-qaab meeshuu doono ha ka eegnee. Kani waa iPhone 6 ilaa 2014.
Waxa kale oo aad arki kartaa sida qaybta hoose ee aaladuhu u ahayd, iyada oo ka socota haysashada kaliya isku xiraha USB-ga sidoo kalena leh godadka afhayeenka iyo makarafoonka ku dhowaad meel la mid ah sida iPhone 6. Laakiin waxa ugu fiican ayaa ah haddii aan eegno xagga hore, mudane. Tong. Maxaad ka leedahay sawirka soo socda?
Maxaa ku dhacay af-hayeennadii hore? Maxaa ku dhacay dhinacyadan? Sideed ula timid inaad dhigato badhanka guriga haddii ay runti ku salaysnayd M7? J) Haa ?:
Maxaan ka qabaa HTC One A9? pic.twitter.com/1q2dHXsBvm
- Lester Chan (@gamerz) October 22, 2015
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » HTC: "Waa Apple kan na nuquliya"
Haddii iPhone 4s ama iPhone 5 midkoodna uusan si cad u jiri lahayn naqshadda HTC-kii hore midkoodna sidaas ma noqon lahayn. Waxay si fudud uga hormareen saadaalintii.
Flash-ka laba-dhawaaq ee HTC M7 waa, runti, laga soo bilaabo 2013, bilawgii sanadkaas, halka 5-na ay haysteen dhammaadkii 2013. Si kale haddii loo dhigo, Apple-gu ma koobin oo kaliya anteenada band. Hada ha caban.
Salaan, Rafa. Haddii aad raadineyso sawirrada M7, waxay leedahay kaliya wareeg wareeg ah. Waa M8 (2014) oo leh bilig laba midab leh.
Maxay uga hadli la’yihiin kamaradaha sida kan hore. Taleefanka ugu horeeya ee leh kamarada hore iyo awood u lahaanshaha sheekada fiidiyoowga ah ee htc marka labaad iphone (nuqul) si la mid ah samsung, lg, motorola ect. Kuligood way isaga koobiyeeyaan waxayna ku leeyihiin guusha ay leeyihiin htc. Shirkadda kaliya ee runtii wax cusub soo bandhigeysa waa htc waxayna ku dhammaataa dhiirrigelinta dadka kale
Hubaal Telefoonkii hore ee kamaradda hore wuxuu ahaa HTC. Sanadkii 2003 http://www.nerdeky.com/history/sony-ericsson-z1010-–-world’s-first-phone-front-facing-camera
Oh maya. Waa Sony Ericsson…
Zas afka oo dhan XDDD
Telefoonkii ugu horeeyey ee watay kamaradda hore wuxuu ahaa HTC maxaa yeelay Sony ayaa lahayd laakiin iyadoon suurtagal ahayn inaad aragto waxaad qabatay sababtoo ah waxay ahayd inaad taleefanka daboosho hehehe dhammaantood waa la koobiyeeyaa laakiin HTC ayaa ka asli badan dhammaan.
Sony waxay ku haysatay shaashadda hoosteeda. Raadi naftaada.
«Sony Ericsson Z1010 oo leh kamarad horay u jeeda ayaa soo bandhigtay tiknoolajiyad gebi ahaanba cusub. Kaamirada taleefanka kacaanka ah ee wajiga hore u jeedda waxay laheyd 0.3 megapixels dareemayaal sawir iyo muuqaal wicitaan.
Selfie iyo VIDEOCALL.
Gacaliye waan jeclahay iPhone-ka, sikastaba Apple wuxuu ahaa kii soo guuriyey HTC.
HTC one M7 waxaa la bilaabay Febraayo 2013 oo lagu soo daray naqshadda anteenada iyo iPhone 6 waxaa la sii daayay Sebtember 2014. U ekaanshaha iPhone 6 uu la lahaa HTC one M7 aad buu u badnaa halkaana HTC ayaa gacanta sare ku lahayd.
Taageerayaal ahaan waxaan isku dhejineynaa difaaca laakiin waa in la aqoonsadaa in soo saarayaasha kale ay sidoo kale dadaalkooda muujiyaan.
Marka la soo koobo, waa dagaal aan dhamaad laheyn laakiin marwalba waa inaad aragtaa wanaagga iyo xumaanta mid kasta, xitaa haddii ay isku mid yihiin.
Waa salaaman tahay Manuel. Waxaad ku tiirsan tahay oo keliya dhinaca dambe. Iyo hogaanka? Iyo gooladaha dhinacyada? Iyo kuwa hadlaya?
Waxaan u maleynayaa inaadan sifiican u dareemin, xitaa sawirka ugu dambeeya. Falaarta buluugga ah waxay ka yimaadeen shirkadda HTC ee aad difaaceyso in Apple ay soo guuriyeen HTC-ka oo internet-ka oo dhan uu sheegayo inuu yahay nuqul (haddii kalese muxuu madaxweynuhu diidaa?). Fallaaraha gaduudan ayaa midba kan kale ka dhaca.
Laakiin, haye, isagoo leh IPhone 6 wuxuu u egyahay M7 kaliya anteenooyinka dartiis mana arko gadaal fidsan, badhanka guriga, makarafoonka, kuhadlayaasha, dhinacyada, murqaha dhabta ah ee laga dhaxlay M8 iyo inaan arkay markii ugu horeysay 5-ta, taas oo ka tagtay qaabka D si loo sameeyo 0 ...
Haa waxaan ula jeedaa gadaal iyo anteenooyinkooda, runtii waxaan jecelahay inaan wax badan ka doodo cidda nuqul ka sameyneyso.
Midda aan aadayo "Dabcan HTC waxay u egtahay Iphone 6s waxaan dhihi karnaa waa nuqul" laakiin mararka qaar midba midka kale ayuu nuqulayaa kana soo horjeedaa.
Dabcan, maadaama Apple uu halbeeg u yahay suuqa, sidaa darteed, tartanku wuxuu ka nuqul ka badan yahay iyaga Apple marka loo eego kuwa kale.
Pablo hadaad aqriso boostada waxay dhahdaa parq video call waxaana ku iri awooda sheekeysiga fiidiyowga inay yihiin 2 isku mid laakiin waxyaabo kala duwan. 😉
Ma ahan wax ka duwan. Sidee ayuu uga duwan yahay? Wicitaanka fiidiyaha iyo hadalka fiidiyaha waa tarjumaadaha.
HTC ma ahayn kan kaliya ee isticmaala taleefanka Windows. Kuwani waxay ahaayeen PDAs mana aysan laheyn xiriir internet ama kaamirooyin. Ma isbarbardhigi karno taleefannadii markii dambe yimid. Waxay markii hore ahaayeen PC Pocket. Mid ka mid ah ayaan qabtay. Lama barbar dhigi karo taleefan.
Waxaan kugula talinayaa inaad wax ka akhriso PDA. Fiiri waxa ku qoran John Scully. https://es.m.wikipedia.org/wiki/PDA
Qof kastaa wuu soo guuriyey htc dhanka softiweerka iyo muuqaalka labadaba qofkasta oo dunida dunidana kala socda mobilada daaqadaha moobiilka ilaa maanta wuu ogyahay.
Ma garanayo sababta ay ula dagaallamayaan cidda soo guurisay, nabarradaasi waxay u muuqdaan kuwo laga naxo. Hadana booskaas oo dhan uga tag boodhka hore, wax laga naxo, oo ku hadla kuwa ku hadla salka hoose ee daboolan marka aadan ciyaareynin wax aad sameyso
Khadadka ku yiil dhabarka dambe ee M7 waa kuwo laga doodi karo ... Laakiin marka laga tago af-hayeenka hore ee hadalka oo loo gudbo mid monophonic ah oo kaliya meesha ay Apple ka dooneysay Iphone 6 iyo qaababka flat-ka ah iyo kuwa aan la aqoon ee HTC waa durbadiiba nuqul foolxun ... Taasi waa sababta horeyba Qalabka cusubi uusan u soo jiidanayn dareenkayga sababtoo ah Galaxy S6 wuxuu u eg yahay Iphone 6, hadda HTC wuxuu ku darayaa nacasnimada nuqul ... Kaliya LG, Sony iyo Motorola ayaa hadhay, kuwaas oo lagu yaqaan riwaayad la'aan cidda nuqulo yaa
Ok Pablo marka hore tan iyo 2005 ama waxaa laga yaabaa in xoogaa aan dib u soo celiyo taleefannadii markii horeba lahaa xiriir internet ah. Ta labaad, haddii aad wakhti kasta haysato qafis kumbuyuutaro leh wos aan ahayn wp xirfadle ama mobiil taleefan casri ah oo wata moosaska caadiga ah, sida mootada ay ku leeyihiin xiriir 3g iyo adabtarada kaarka wifi. Ta labaad, wicitaanka fiidiyowga ayaa loo oggol yahay waxa hal guri isla waqtigaas ahaa, sheekada fiidiyowga ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku xirnaato in ka badan hal qof fez haddii xitaa 2015 aadan aqoon.
Ah okay Marka sheekaysiga fiidiyowga (wicitaanka fiidiyowga kooxeed ...) waa softiweer, wax aysan HTC abuurin. Barnaamijka loogu talagalay wadahadalka fiidiyowga waxaa abuuray Microsoft, Apple, Google, Nokia iyo kuwa soosaara, laakiin ma ahan shirkadda HTC. La'aantood kuwa abuura barnaamijka, HTC-ga aad sheegayso kama duwanaan doono Sony Ericsson ee 2003 macnahaas.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa halkan wax ka faalloonayaa waxay ogyihiin oo keliya wixii ka socda android iyo iphone wixii ka dambeeya. Qaarkood waxay ogaan doonaan sida, tusaale ahaan, snayo mm7500, taleefan 2005tii lahaa cod amar qof walbana wuxuu aaminsan yahay in lagu soo bandhigay tufaax hahhaha. Sannadkii 2005-tii orodku wuxuu lahaa waxa uu ugu yeeray aragtida awoodda baabinta iyo ku xirnaanta internetka, ma ogtahay taas Pablo ??? Uma maleynayo sidaas. Dhamaadka telefoonada gacanta, waan kula hadli karaa, waxbadan ayaan ogahay hadana wali waxaan hayaa xoogaa aniga (htc hd2, samsung jack, htc touch)
Waxaad yeelan doontaa taleefanno badan, laakiin midkoodna faa'iido kuuguma lahayn inaad barato qorista. Ku tuur iskuulka oo jooji taleefannada badan.
Waxaan haystay nokia 9000 sanadkii 1998 aniga oo wata internet iyo Fakis ... halkan intiisa badani ma ogeyn waxa internetku yahay !!!!
Waxaan adeegsaday amarada codka si aan ugu waco Nokia 3310 (sanadkii 2000). Aragtida awoodda ayaa xiriir internet lahayd? Miyaadan arag filimka "muxsiniinta" (Nokia Communicator 9000, 1996) tusaale ahaan? Sannadkii 2004 waxaan haystay Nokia 3650 mar horena waan ku xidhnaa internetka, moobilkuna ma ahayn Nokia ugu horreeyay ee ku xidhi kara internetka ...
Ka taxaddar, ma dhahayo waxaas oo dhan waxaan ku leenahay Apple. Waxaan kaliya dhahayaa kuma lihin HTC isla markaana HTC waxay ku tiirsanayd iPhone 6 inay naqshadeyso A9-keeda.
Waxaan haystay nokia 9000 '98, taasi waxay ahayd qajaar waqtigaas, Fakis, internet, emayl, iwm ... Horey ayaan u lahaa internetka iyo mobilka markii qofna halkan internet ku haysan guriga hahaha
Haber, waa wax aan muran ku jirin in Apple "amaahday" anteenooyinka HTC, laakiin ha ii imaanin in HTC uusan nuqul ka sameysan iPhone-ka maxaa yeelay waxaad si muuqata u arki kartaa * kuwa ku hadla afka hore way baaba'aan, waxay bedelaan nidaamka micro usb iwm * Ugu dambayntii iyo markii u dambaysay, qof kasta oo hal dhibic ka socda ayaa * nuqulaya * kuwa kale, tusaale ahaan, S6, iPhone iyo HTC waxay leeyihiin muuqaal isku mid ah, inkasta oo ay jiraan midabbo dhadhamiya. Waxaan rajeynayaa in IPhone 7 Apple uu sameyn doono wax kacaan ah * Waxaan jeclaa naqshada shaashadda oo buuxda iyadoon badhanka guriga ku jirin maqaal maalin kale * Salaan!
Haddii aan akhriyo bogga wararka ee Ingiriisiga ah, oo aan doonayo in aan faallo ka bixiyo, waxaan ku samayn doonaa Ingiriis. Boggan waa Isbaanish, markaa haddii aad faallo ka bixiso, ku samee Isbaanish, ha ku samayn Laatiinka. Halkan kuma dhihi karno kuwa hadlaya, waxaan dhahnaa kuwa ku hadla, mana ahan in qof walbaa ogaado ama ka jaro erayadaada marka laga reebo Isbaanishka, sida gaariga = gaariga, xannibaadda = wadada.
Oo diiradda la saaro arrinta taagan. Ilaa iPhone 6 waligeyba waxaan haystay taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya, waxaanan ahaa difaac adag oo adduunka android ah, laakiin ma difaaci kartid waxa loo diidi karo, waana taas in HTC ay samaysay nuqul 1: 1 ah Iphone, kaliya bedelida astaanta. Waa hal shay in shirkadaha ay dhiirrigeliyaan tartanka, qaataan fikradaha u shaqeeya sida 3D taabashada, iyo mid kale ayaa ah inay sameeyaan nuqul cayriin oo aan shaqsiyad lahayn, isku daygii ugu dambeeyay ee quusta ah ee lagu iibinayo taleefannada gacanta xitaa haddii ay ku kacayso dhaliisha hore u ogaa inay helayaan.
Javier ha hadlin adigoon ogeyn inaan wado iyo faalo.
Sidaa darteed, Pablo, waxaad horeyba u ogayd inay ahaayeen wixii PDA, taleefanka casriga ah iyo PC jeebka lahaa xiriir internet iyo kaamirooyin runtiina in badan oo iyaga kamid ah oo aan laga iibin Mareykanka ay lahaayeen kaamirada hore, kamarada gadaal iyo kaamirooyinka kale ee wareega 360 darajo. .
Weli qalad ah ... Weli ma wadtaa gaari?
Ma aha inaan si xirfad leh u qoro marka hore iyo tan labaad, waxaad tahay qofka kaliya ee jaahil ah ee u baxa inuu waxyeelleeyo wadahadalka. Halkan waxaan ka hadleynaa taleefannada iyo waxayaabaha ay isku mid yihiin haddii aad rabto inaad ka hadasho otography noqo macallin iyo fasal.
Maxaa keenay in qof qosol badan had iyo jeer ka dhex muuqdo golayaasha?
Waxaa had iyo jeer u muuqda nin reer miyi ah oo sidaada oo kale ah, oo ay u dheer tahay inuusan ku saxneyn wax kasta oo uu yiraahdo, wuxuu ku doodaa inuu wax u qoro sida ortho ... Ale ka raadi qaamuus taleefanadiisa badan!
Maahan ku saabsan qorista xirfad ahaan, haddii aysan ku jirin Isbaanishka, iyo hab la fahmi karo. Maxaad waday? Hagaag, marka hore, halkaan wadista waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan si loo muujiyo hanashada wax, sida inaad luqad si sax ah u maamusho, wax aadan aqoon sida loo sameeyo iyo xitaa xitaa ka yar haddii aad sameyso intaad gaariga wado. Weli waad shil galeysaa waadna "dhaawacmi doontaa" waxaan ku saaray carrabkaaga si aad wax u fahanto, jaahil.
Waxba igama gelin cidda koobiyeynaysa cidda, anigu waxaan u qalmaa hooyooyinka. Uma badalayo iphone-kayga wixii HTC ah.
Jawaab Roberto Cedano
Waxay u muuqataa in Juan iyo Javier (Rome iyo Juliet) ay leeyihiin jacayl hahahaha.
Haye lovebirds ha sumaysan hahaha = DD.
Waxaan aqriyay faallooyin doqon ah laakiin kii qoray Juan wuxuu dhigay heer cusub, hada waxaa soo baxday inaad fikirkaaga ku dhiiban karto oo kaliya Isbaanishka, ma ahan qaladkeena inay heysato erayo aad u yar oo yareeya, waxaan kugula talinayaa inaad leedahay qaamuus ku ag yaal si loo arko haddii aad fahmi karto ama si siman ha u aqriyin faallooyinka si aanad u dareemin xanaaq badan
Waxaan u maleynayaa in taleefannada casriga ahi ay marayaan isla nidaamka baabuurta. Markii hore, shirkaduhu way masayreen. Laakiin hadda qof kastaa wuu wadaagaa qof walba.
Range Rover Evoque wuxuu adeegsadaa aaladda loo yaqaan 'Ford eco boost engine', tanina waxay markeeda adeegsatay khadadka Evoque ee Ford Explore.
Qof miyuu waashay? Maya, cidna.
Aan aragno maalinta ilbaxnimada adduunka baabuurta nala soo gaadhay.
"Hey Siri" waa mid naafo ah marka iPhone-ka jeebka lagu ridayo
Eclipse 3 beta ee iOS 9 hadda waa la heli karaa